Kedu ihe ntanetị weebụ? 5 Ụzọ site na ihe mgbochi iji gbochie mkpokọta weebụ na-akwadoghị
Nchịkọta weebụ, nke a makwaara dị ka nchịkọta weebụ, nchịkọta ihuenyo ma ọ bụ data weebụ. nbudata, bụ teknụzụ nke na-enyere aka ịhazi ma wepụ data site na otu ma ọ bụ karịa weebụsaịtị. Ị nwere ike gbanwee URL dị iche iche ma jiri ha n'ụdị CSS, JSON, REGEX, na XPATH faịlụ. Ya mere, nchịkọta weebụ bụ usoro mgbagwoju anya nke ichikota ozi na-akpaghị aka site na net. Usoro ihe ntanetị weebụ na ntanetị ndị dị ugbu a sitere na ad-hoc na usoro zuru ezu na-akpaghị aka nke nwere ike ịmegharị weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ zuru ezu na ozi bara uru na nke ọma.
Ụzọ iji gbochie nchịkọta weebụ na-akwadoghị:
Onye na-elekọta weebụ nwere ike iji usoro dị iche iche mee ka ọ kwụsị ma ọ bụ kwụsị nkwụsị ọjọọ. A na-akọwa ụzọ ndị kasị baa uru n'okpuru:
1. Block IP address:
I kwesịrị igbochi spammers adreesị IP aka ma ọ bụ jiri ngwaọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya.
2. Gbanyụọ ọrụ API ọrụ weebụ:
Ọ dị mma iji gbanyụọ API ọrụ weebụ nke nwere ike igosipụta. A na-egbochi bọtịnụ ndị na-eji ụdọ na-elekọta ndị mmadụ na usoro a n'enweghị nsogbu.
3. Nyochaa okporo ụzọ weebụ gị:
Ọ dị mkpa ka anyị niile nyochaa okporo ụzọ weebụ yana àgwà ya. Ọ bụrụ na ị naghị eji ọrụ SEO ma na-enweta ọtụtụ ọnụọgụ ngosi, ọ nwere ike ịbụ na okporo ụzọ bọl na-akụ gị.
4. Jiri captcha:
Ị ga-eji usoro captcha iji wepụ bots ọjọọ na scrapers website . Ọtụtụ mgbe, bots enweghị ike ịchọpụta ihe odide edere na captcha ma enweghị ike ịzaghachi nsogbu ndị a. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike ịnweta okporo ụzọ ndị mmadu nanị ma kpochapụ bots.
5. Ọrụ mgbochi azụmahịa:
Otu ụlọ ọrụ buru ibu na-enye antivirus na mmemme bot-bot. Ha nwekwara ụdị ọrụ ntanye maka webmasters, ndị na-ede blọgụ, ndị mmepe, na onye mmemme. Ị nwere ike ị nweta ọrụ ndị a iji wepụ ntanetị weebụ.
Ụzọ abụọ dị iche iche iji jiri scrapers web saịtị:
Site na ntanetị weebụ, ị nwere ike ịmepụta saịtị ma jiri ụgbọelu wepụ data dị mkpa maka onwe gị.
1. Ngwaahịa na ahịa:
E gosipụtara na nyochacha ọnụahịa pụrụ inye aka melite oke uru uru site na iri ruo pasent 20. Ozugbo a kpochapụrụ ngwaahịa na ahịa, ọ ga-adịrị gị mfe ịma otú ị ga-esi azụlite azụmahịa gị na ntanetị na otu esi ere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ngwaahịa na ọrụ. Usoro a na-eji ebe nrụọrụ weebụ na-agakarị, ebe ụlọ ọrụ e-azụmahịa, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ yiri nke ahụ.
2. Soro ntanetị gị ntanetị mfe:
Ọ bụ otu ihe dị mkpa ma dị mkpa nke ntanetị weebụ ebe profaịlụ azụmahịa na nyochaa saịtị dị iche iche. A na-eji ya iji nyochaa arụmọrụ nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, mmeghachi omume na omume ndị ọrụ, na ọdịnihu nke azụmahịa. Usoro nyochaa weebụ a nwere ike inyere aka ime ndepụta na tebụl dabere na nyocha ndị ọrụ na nchịkọta azụmahịa Source .